Amathiphu okusinda nge-telecommuting | Bezzia
UMaria vazquez | 15/09/2021 10:00 | Owesifazane ophethe
Ubhadane luguqule imikhuba yethu eminingi. Ngesikhathi beboshiwe iningi lenu belifanele ukusebenza emakhaya futhi ngineqiniso lokuthi ngeke nonke nibe nezenu ehhovisi uma lokhu sekuphelile. Kungakho sicabange ukuthi abanye amathiphu okusinda ekusebenzeni ngocingo zingaba wusizo kuwe.
I-Teleworking inezinzuzo sonke esikwazi ukuzibona: songa ohambweni futhi sijabulele ukuguquguquka kwesikhathi esithe xaxa. Kodwa-ke, kuphela labo kithi asebeneminyaka bexhumana ngocingo siyabazi nobunzima babo. Sike sabhekana nawo futhi sathola amathuluzi awusizo kakhulu wokuwanqoba.
1 Setha imikhawulo osukwini lomsebenzi
2 Dala "imodi" esebenzayo
3 Fundisa umndeni
4 Hlela uhlelo lwakho
5 Phuma endlini
Setha imikhawulo osukwini lomsebenzi
Funda ukuphatha isikhathi kuyisihluthulelo lapho kushayelwa ucingo. Iqiniso lokuba nesikhathi esivumelana nezimo kakhulu nehhovisi lasekhaya lingasikhuthaza ukuthi sandise amahora ethu okusebenza, mhlawumbe ngoba sihlehlisa, noma ngoba uma umsebenzi usuphelile silingeka ukuqhubeka nokuphendula ama-imeyili.
Beka imikhawulo emahoreni ethu okusebenza ekhaya kubalulekile ukuze usuku lwethu lungabi namahora angama-24. Uma bengakusebenzeli isheduli evela emsebenzini kepha beka imigomo, nciphisa amahora akho. Thatha isinqumo sokuthi uzosebenza ngasiphi isikhathi nokuthi uya ngasiphi isikhathi nokuthi uyophumula nini. Uma ufuna ukukhiqiza futhi ugcine ukulingana phakathi komsebenzi wakho nempilo yomndeni, kufanele ufunde ukunqamula emsebenzini futhi uhloniphe amahora akho okuphumula.
Dala "imodi" esebenzayo
Lapho umuntu eqala ukuxhumana ngocingo, isilingo senza umuntu alahlekelwe yileso sidingo sokugqoka aye emsebenzini. Imvamisa kuyiphutha lokuqala elixhumanisa abanye abaningi. Futhi ngukuthi ukusinda ekusebenzeni ngocingo kuyisihluthulelo sokufaka imikhuba esenzayo faka imodi yokusebenza.
Hlukanisa imodi yokusebenza kwimodi yomndeni kuyisihluthulelo senhloko yethu ukuthi isebenze kahle. Futhi ukufundisa imindeni yethu, uma sinayo, yokuthi kufanele nini futhi kungafanele isiphazamise. Khetha indawo ozosebenzela kuyo Lokho usebenzisa kuphela lapho usebenza futhi ugqoka sengathi kukhona umuntu angavela endlini yakho nganoma yisiphi isikhathi. Gxila emsebenzini wakho uma nje kudingekile bese ukhohlwa yileso sikhala noma uqoqe izimpahla zakho zomsebenzi ekhabetheni bese uzenza ukhululeke.
Lapho kungekho muntu ekhaya owake wasebenza ngocingo ngaphambili, wonke umndeni uphoqeleka ukuba wenze inqubo entsha. Futhi lonke ushintsho emikhubeni nakwimizila kudinga isikhathi sokuzivumelanisa nezimo. Ukukhuluma nomndeni wethu, sichaza amashejuli ethu nokuthi noma ngabe usekhaya ngeke utholakale ngokugcwele kuze kube sekupheleni kosuku lwakho kuyisihluthulelo sokuqala okuhle.
Isilingo Izomema umndeni wakho ukuthi uzokuphazamisa ezinsukwini zokuqala ngenkathi usebenza futhi uhambela imisebenzi yasendlini engalinda noma ukujabulela izinjabulo ezithile ongakwazi ukufinyelela kuzo ehhovisi. Kunengqondo ukuphazamiseka phakathi namasonto okuqala, ngakho-ke phakathi naleso sikhathi kubaluleke kakhulu ukuthi uqine nokuthi uma unomuntu ekhaya ngenkathi usebenza angakuxwayisa lapho uphazamiseka, ukubambisana! Lapho nonke senikujwayele futhi inqubo entsha ifakwa ngaphakathi, konke kuzoba lula futhi ukwazi ukuguquguquka.
Hlela uhlelo lwakho
Uma uphethe i-ajenda lapho uya ehhovisi, kungani ume manje? Hlela uhlelo lwakho njengoba wenza ngaphambilini futhi ubuyekeze imisebenzi njalo ekuseni, ubeke phambili ngokuhamba kwesikhathi leyo ebaluleke kakhulu. Bhala phansi ukuthi uzosebenza ngasiphi isikhathi, uzosebenza ngasiphi isikhathi emini ukuze udle futhi uphumule ... Ungakwenza usebenzisa i-ajenda yephepha, ikhalenda yakwaGoogle noma izinhlelo ezilula nezinembile ezifana ne-Todoist.
Lapho sithumela ngocingo, silahlekelwa uhlangothi lwezenhlalo lokuya ehhovisi, ukuxoxa nozakwethu noma ukuphuza ikhofi nabo ekuphumeni. I-Inertia, ngaphezu kwalokho, ingasicindezela ukuthi sihlale ekhaya ngemuva komsebenzi futhi ukumelana nakho kuzodingeka ukuze siphile nge-teleworking. Uma usebenza ngocingo kubaluleke kakhulu uma kungenzeka hlangana nabangane, bamba iqhaza emdlalweni weqembu, phuma uyodla noma uhambe ngohambo lwangempelasonto ...
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Indlela yokuphila » Owesifazane ophethe » Amathiphu okusinda nge-telecommuting